Mpifaninana ho solontenan’ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin’ny filankevipitantanana GV 2020: Adéṣínà Ghani Ayẹni (Ọmọ Yoòbá) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2020 5:56 GMT
Adéṣínà Ghani Ayẹni (fantatra ato amin'ny GV amin'ny hoe Ọmọ Yoòbá) dia avy any amin'ny faritra atsimo-andrefan'i Nizerià. Mpanao gazety mifantoka amin'ny fisoloana vava ny fiteny sy ny zo nomerika, izy no nanorina ny “Yobamoodua Cultural Heritage” ary mampiasa izay rehetra fitaovana misy ho fampahafantarana an'izao tontolo izao ny fiteny sy ny kolontsaina Yorùbá. Mitantana rantsana iray misahana ny varotra nomerika ao amin'ny “Federal Radio Corporation of Nigeria, Lagos Operations” i Adéṣínà ary mitantana ny rantsana iray misahana ny votoaty nomerika ao amin'ny Bond 92.9 FM. Tafiditra ao amin'ireo zavatra mahaliana azy ny zavakanto, ny siansa, ny teknolojia ary ny fanatrarana ny fahafahan'ny rehetra miditra aterineto. Ny Novambra 218 no niditra ho ato amin'ny Global Voices i Adéṣínà ary tomponandraikitry ny asa fandikàna ny Global Voices amin'ny fiteny Yorùbá.
Ireo rehetra nirotsaka ho fidiana ho ao anatin'ny filankevipitantanana 2020 dia nasaina namaly ireo andiana fanontaniana vitsivitsy eto ambany. Aza misalasala mametraka fanontaniana fanampiny amin'i Adéṣínà atao ao anatin'ny toerana ho an'ny fanehoankevitra amin'ity lahatsoratra ity!
Tiako ny hanana traikefa tsy mbola nifindra tànana amin'ny fomba fakàna fanapahankevitra ato anatin'ny vondrompiarahamonina GV, ary koa hianatra avy amin'ireo manampahaizana manokana sy ireo anti-panahy ao anatin'ny filankevitra.
Voalohany sy mialoha ny zavatra rehetra, amin'ny maha-mpanao gazety sy Mpanao tetikady nomerika ahy ho an'ny onjampeo lohalaharana ao Nizerià, hitondra ny traikefako amin'ny fanapariahana sy ny fitrandrahana fandaharana aho. Ary koa, mahay tsara an'ireo rindrambaiko fampiasa amin'ny famokarana haino vaky jery, afaka ampitaina amin'ny filankevipitantanana ny fahaizako amin'ireo sehatra ireo, satria heveriko fa tokony hananan'ny GV ny fampielezampeo sy fahitalavitra nomerika iray, tokony hikisaka avy amin'ny tatitra an-tsoratra mankany amin'ny haino aman-jery isika, tena ilaina izany satria asehon'ny tatitra fa ny mihaino sy mijery ety anaty aterineto no tena ataon'ny olona kokoa raha mitaha amin'ny famakiana lahatsoratra.
Toy ny nambarako tamin'ny valin'ny fanontaniana teo aloha, tena maika ny hananan'ny GV haino aman-jery ho an'ny daholobe, isika tokony hifantoka amin'io. Fanampin'io, isika tokony hampiantrano hetsika famondronana ny tanora mba hanabezana azy ireny momba ny lanjan'ny fanaovana tatitra anaty vondrompiarahamonina ka hisian'ny fampandrosoana ny firenena sy erantany. Amin'ny fanaovana izany, azontsika atao ny mahazo tatitra momba ireo olana izay mety tsy ho vitantsika akory ny namoaka azy. Ireo soritra ireo dia manome tombony antsika hanoratra tantara goavana amin'ny fanarahana gadona. Ny fifanarahana fiarahamiasa amin'ireo sampanasa Fampitambaovao ho any Daholobe any anatin'ireo andrimpanjakana dia fomba tsara hanapariahana ny fandaharanasan'ny GV. Ho an'ny tombontsoantsika manokana sy ho an'ny firoboroboantsika.
Amin'ny maha-mpikatroka ho an'ny zon'ny fiteny /nomerika ahy, na ny Advox, na ny Lingua dia samy mahaliana be ahy. Etsy ankilany, ny Rising Voices koa dia manandanja be satria manome sehatra ireo feo tsy fandre firy nefa nahavita zavatra goavana, efa nisy fotoana aho tao amin'ny Rising Voices ary tena nidika zavatra be ho ahy tokoa izany.
Ny fahafantarana misimisy kokoa momba ny fandraisana fanapahankevitra ao anatina vondrompiarahamonina iray erantany toy ny GV dia dingana iray goavana mizotra mankamin'ny fampandrosoana sy ny firoboroboana ireo ezako ho fanandratana ny fiteny, ary koa eo amin'ny sehatry asako sy ny an'ny tenako manokana amin'ny maha-tanora mpitarika ahy.
Misy foana fotoana ho an'ny zava-drehetra, ary misy foana ny fotoana malalaka ivelan'ny fotoana mahabe asa ny tena, vitako ny mandamina ny asako sy ny zavatra atao ho an'ny tena manokana miaraka amin'ny asan'ny filankevitra.
Noho ny zavamisy hoe izaho tsy afaka ny ho eo foana handray anjara mivantana aminà fivoriana virtoaly indraindray, fomba iray tsara indrindra koa hiresahana amin'ny vondrompiarahamonina ny imailaka, WhatsApp, Signal na sehatra VoIP hafa izay ahafahantsika mifametraka hafatra ifandraisan'ny tsirairay, saingy izany akory tsy entina hilazàna hoe tsy ho afaka hanatrika fivoriana virtoaly mihitsy aho amin'ny fotoana rehetra.